Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Wellbeing Magazine ibonisa uKen Kladouris
Kwangoko kulo nyaka, uKen Kladouris ubhengeze ukumiliselwa kwekhosi yakhe ekulindeleke ukuba ibekho kwi-Intanethi enomxholo othi "Ukuzinza kwempumelelo."
Ikhosi yenzelwe ukubonelela ngothotho lwezifundo ezijolise ekuncedeni abantu baculele ngaphakathi ukuze bafikelele kwisakhono sabo esipheleleyo.
Usomashishini uKen Kladouris wakhetha ukuphuhlisa lo mnikelo emva kokutyala iminyaka emininzi ekuziphuhliseni, ukuqonda indlela yokunceda amadoda nabasetyhini baziphakamise, ingqondo, umzimba kunye nomphefumlo. Inxalenye yohambo lukaKen lubandakanya ukurhoxa kuthe cwaka ixesha elide, kunye nokubuyela kwakhe kwindawo yakhe yesithathu kunye kutshanje kunye nezifundo azifundileyo ekwabelwana ngazo ngeMagazini ye-Wellbeing.
Oku kurhoxa kuthe cwaka minyaka le ibe likhefu kumsitho kwaye uKen ujonge phambili ekubambeni iindibano ezithe cwaka kunyaka ozayo nabaphumeleleyo kwinkqubo yakhe.
“Kuyinyani oko bakuthethayo- uhambo oluya ekuzaziseni lubangcono ngotyalo-mali ngalunye kwinkqubo. Ndijonge phambili ekwabelaneni ngezimvo ezinzulu malunga nokurhoxa kwam kokugqibela ndithule kunye namalungu ekhosi yokuSima kwiMpumelelo. "